सङ्घर्षले बनाएको यामकुमारीको पहिचान - IpmSamachar सङ्घर्षले बनाएको यामकुमारीको पहिचान - IpmSamachar
गलकोट, बिहिबार, १४ साउन २०७८ । एउटा सङ्र्घषपछिको सफलताको कथा पढ्न लेख्नजति नै आनन्द लाग्छ उति नै सफलता प्राप्त गर्नका लागि गरेको त्याग, सङ्घर्ष र समर्पण सम्झन लायक हुन्छ । सङ्घर्षशील एकल महिलाले ढाका बुनाइमा पाएको सफलता निकै प्रेरणादायी बन्न सफल भएको छ । बागलुङ नगरपालिका– १० भकुण्डे घर भई हाल बागलुङ बजारको गुठीमा बस्दै आउनुभएकी यामकुमारी थापा हस्तकलामा व्यस्त हुनुहुन्छ ।
थापाले एकल जीवन बिताउन थालेको १९ वर्ष भयो । उहाँलाई पहिला अब यो एक्लै कसरी बस्न सक्दछे ? जिन्दगी लामो छ, एक्लै कटाउन सम्भव हुदैंन भन्ने मानिस धेरै थिए । यस्ता कुरा यामकुमारी सुनेर पनि नसुने झैँ गर्नुहुन्थ्यो । विवाह गरेको पाँच वर्षमा श्रीमान्को वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया जाने भन्दै काठमाडौँ गएर राहदानी बनाएर फर्किंने क्रममा गाडी दुर्घटना भएर त्रिशूली नदीमा परेर मृत्यु भयो । श्रीमान्को मृत्युपछि उहाँको थप सङ्र्घष र दुःखका दिन शुरु भए । बिहान बेलुका छाक टार्न मात्र होइन, श्रीमान्ले चिनो छाडेर गएको छोरालाई हुर्काउन, बढाउन, पढाउन र समाजमा आफ्नो नाम स्थापित गर्नका लागि उहाँलाई ठूलो चुनौती भयो ।
अहिले छदेखि सात सालसम्मको सामान यामकुमारीको पसलमा छ । बागलुङ बजारमा ससुराले घडेरी किनी दिएर सगारीयामा घर बनाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । अहिले भइरहेको पसललाई थप व्यवस्थापन गरेर अझै राम्रो बनाउने उहाँको लक्ष्य छ । बागलुङ बजारकै नमूना ढाकाको कपडा पसल बनाउने अबको उहाँको योजना छ । पसललाई थप व्यवस्थित पारेर महिलाका लागि तालिम दिनका लागि राम्रो तालिम कक्ष पनि बनाउने चाहाना यामकुमारीको छ ।
फोटोमा आज : पालुङटार नगर प्रमुख इ. दीपक बाबू कंडेलद्वारा निरीक्षण
चढाईँयो ऐतिहासिक स्थल श्रीनाथकोटमा पहिलो पटक सवा-लाख रोट
ipbari - June 15, 2021
ipbari - June 12, 2021
अजिरकोट गाउँपालिका रैथाने कृषि बालीको संरक्षण गर्दै
ipbari - June 3, 2021
ipbari - February 5, 2021